Seeraar: Martin Vrijland
Miyuu 2018 yahay sanadka soo bandhigidda lacagaha SDR ee ku xiran lacagta laysku haysto?
Horaantii todobaadkan waxaan daabacay bogga hore ee majaladda The Economist from 1988. Waxay muujinaysaa dabeecad isku dhejisa lacag gubanaysa. Qoorta qoorta ee fenix waa dahab dahab ah oo la arki karo oo aad u xasuusta quwadda baco ah ee baco. Dhinaca kale, [...]
Sida dhirta iyo kuwa kaleba waxay ku xirnaan doonaan Xuquuqda sawirrada IMF (SDR) via ACChain
Iyadoo qof walba waxa uu haatan diirada saarayaa Seeraar in la sameeyo lacag degdeg ah iyada oo loo marayo lacag crypto, ka crypto-Crore muuqataa dhab in la horrayn wiiqi nidaamka lacagta hoos aragti ah in crypto lacagta aan gacanta oo ka mid ah bangiyada waaweyn iyo IMF . Waxay noqon laheyd lacag loo isticmaalay qarsoodi [...]
Sababtoo ah ma jiro waddan adduunka ah oo ka cabanaya isticmaalka awoodda weyn ee Bitcoin
Cryptocurrency sida (gaar ahaan) bitcoin waxay isticmaalaan koronto badan! Taasi waa wax badan in ay ka badan tahay isticmaalka tamarta ee wadamada oo idil. Dhismaha Bitcoin wuxuu isticmaalaa awood ka badan dalalka sida Ireland iyo Nigeria. On 28 November website Naturalnews.com waxay la timid isticmaalka tamarta tamarta ee bitcoin marka loo eego dhammaan dalalka adduunka (fiiri halkan). [...]
Maxay Bitcoin leeyihiin inay sameeyaan 'kalinimada' iyo isku-xidhka AI?
Marka ugu horeysa ee aad u tagto ifafaalaha 'baco', waxaad u timaadaa falanqeyn sahlan sida aan ku siiyey qodobkan. Taasi waxay siin kartaa dareen aasaasi ah oo ku saabsan waxa dhirta ama dhirta 'cryptocurrency', laakiin dhab ahaantii waxay ahayd matilaad aad u yar oo xaqiiq ah. Cryptocurrency waa wax badan oo uu leeyahay wax kasta oo [...]
Miyuu Bitcoin iyo 'Xogta Weyn' kubbadda cusub ama saliidda cusub?
Sanadihii ugu horreeyay, bitcoin waxaa inta badan loo adeegsaday dad doonaya in ay si qarsoodi ah u dhiibaan daawooyinkooda iyo boostada guriga. Kuwa bilaabay 7 sano ka hor oo ay illoobeen euro 10 ee dhirta ayaa hadda laga yaabaa inay yihiin millionaires ugu horeeya. Haddii xNUMX aad kaliya bixiso euro 2010 [...]
Guud ahaan Wadarta: 1.344.927